Nezvedu - Shanghai Langyi Inoshanda Zvekushandisa Co., Ltd.
Shanghai langyi functional materials Co, Ltd. yakavambwa muna2010, ichitarisa pakupa yakakosha mashandiro ekuwedzera mhinduro kune ester-yakavakirwa polymer zvinhu, uye ichiramba ichipa hupenyu-hwekutenderera hunoshanda kusiyanisa masevhisi evatengi mune ester-yakavakirwa polymer indasitiri cheni.
Langyi anotora "technical innovation" sehwaro hwekusimudzira bhizinesi, kukurudzira akawanda-ekuranga kuyambuka nzwisisika mitsva. Pamwe pamwe nemayunivhesiti ane mukurumbira senge fudan yunivhesiti uye donghua yunivhesiti, inopfuura 10% mari yegore negore ye langyi yakaiswa mukutsvagisa nekusimudzira kuvaka yakasimba R & D timu, inopfuura 85% nhengo dzayo dzine madhigirii echikoro kana pamusoro. Uyezve, inopfuura makumi masere muzana% emitezo yeR & D vane madhiragi echiremba kana madhigirii. The kambani ane 11 mvumo kuvamba patents, uye ari kukumbira kuti vanopfuura 20 patents.
Zvigadzirwa zvedu zvinonyanya kusanganisira mashanu akateedzana: HyMax® CA nharaunda-inoshamwaridzika carbodiimide yemvura inotapira-inobatanidza vamiririri, HyMax® novel anti-hydrolysis additives, AntibacMaxTM inorganic simbi ion inorwisa mabhakitiriya uye anti-hutachiona zvinowedzera, AntibariMaxTM infrared chipingamupinyi zvinhu, AntistaMaxTM yakareba-inoshanda antistatic zvinowedzera.
KUPA ZVINOGONESESA ZVIMWE ZVINOGONESESA ZVEVADZIDZISI VEMAZIMBORO KUDZIDZA NEMITANGO YAKANYANYA YOKUSHANDA NOKUSIMBISA RUONANO RWEVANHU NEKUFAMBIRA KWEVANHU VANHU
Kukudzwa uye Kufanirwa
Nyowani yepamusoro-tech Enterprise
Shanghai High-tech Achievements shanduko Chirongwa
Shanghai Epamusoro zana mapurojekiti ekushandurwa kweNew uye High-tech Achievements
Shanghai Yepamberi Enterprise
Shanghai yakawedzera yega bhizinesi
Yakanakisa timu muRuwa rweSongjiang
Songjiang Dunhu Patent kuratidzira bhizinesi
Mubayiro wechitatu weSainzi neTekinoroji Kufambira mberi kweSongjiang Dunhu, Shanghai
Yakataridzwazve red Army Road - Nanhu Revolutionary Memorial Hall
Kuvaka timu kuQingdao yegungwa
Enda kuK Exhibition 2019 kuGerman
Enda kune 2019 Paint Fair
Antibacterial Nonwoven Cloth, Antibacterial Electret Masterbatch, Antibacterial Yarn, Antibacterial Masterbatch, Antibacterial Melt-Yakavhuvhuta Masterbatch, Polymeric Antihydrolysis Mumiriri,